Allgedo.com » Dowlada Ugandha oo Sheegtay Muqdisho in ay ka Furaneyso Safaarad
Print here| By: allgedo.com: Thursday, February 21, 2013 // 1 Jawaab
Qorshahan ay doonayso in Uganda in Muqdisho ka furato Safaaradeeda ee Soomaaliya ayaa lagu micneeyay in qeyb ay ka tahay horumarka iyo ifafaalaha Nabadeed ee la dareemayo, iyadoo dhanka kale Uganda ay tibaaxday in wadanka Soomaaliya oo dagaalo ay aafeeyeen haatan uu u muuqdo mid soo kabsanaya.
Waxaana sidoo kale sheegeen in shabaab oo inta badan ka ariminayay gobolada iyo bartamaha Soomaaliya haatan laga saaray islamarkaana ay joogaan ciidamada xukuumada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Wasiirka arimaha dibada dalka Uganda Okello Oryem, oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in Uganda damacsan tahay inay adkeyso xariirka ay la wadaagto Soomaaliya iyo in la iska kaashado arimaha la xariira ammaanka iyo dhaqaalaha.
Dowlada Uganda ayaa waxay ka mid tahay dowladaha caawiya Soomaaliya ciidamadeedana ugu deeqday Soomaaliya si Al-shabaab ula dagaalamaan.
1 Jawaab " Dowlada Ugandha oo Sheegtay Muqdisho in ay ka Furaneyso Safaarad "
mareexaan dad iska dhega oo inaa salad booye ka daba haara oo toolkiin dhac ka raaca , calcalka iska daaya .